कांग्रेसका ४ समानुपातिक सांसदको नाम सच्याइयो, क-कसको चम्क्यो भाग्य ?
ARCHIVE, POLITICS » कांग्रेसका ४ समानुपातिक सांसदको नाम सच्याइयो, क-कसको चम्क्यो भाग्य ?
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक सूचिका चार सांसदको नाम सच्याएको छ । सच्याइएको अन्तिम नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । उम्मेद्धारी दर्ता गर्दा बुझाइएको बन्दसूचि र पछि पेश गरेको सूचिमा फेरबदल भएको भन्दै कांग्रेससहित पाँच दललाई निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेको थियो ।